အောင်သူရ၊ ဖိုးလုံး၊ နေမျိုးအောင်၊ မျိုးဝင်းအောင်၊ ရန်မျိုးအောင်၊ နိုင်နွေးအောင်၊ စိုးဇေနောင် ၊ ဆင်ကြီး၊ ဝေေ၀၊ နေဇာလင်း၊ မျိုးအောင် ၊ သက်ကြီး၊ တီလုံး၊ ကိုဖြိုး၊ ဌေးဝင်း၊ ကိုကြီးစီ၊ သန့်ထက်အောင်၊ တာတီး၊ ကိုကြီးမိုး
ကိုစန်းဦး (Director - MCC MDY) နှင့် အမှတ်တရ
Amarpreet Singh Bagga @ Nitu 10:16 am
Nice to see all of them again. I remember the time we were in GTC.
MELODYMAUNG 4:36 am
ဟိတ် ကိုချမ်း နင့်ဘလော့တစ်ခုလုံးကို နာမွေနှောက်ရှာဖွေ ဖတ်ပီးပီကွ ဟတ်ဟတ်ဟတ် crawling လုပ်သွားတာနော် :P